Fetiben'ny sambon'ny sambon'ny dragona-Ivotoerana Vaovao-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
SUNSOUL dia hanomboka ny fialantsasatra manomboka ny 7 hatramin'ny 9 Jona ary hiverina hiasa ny 10 Jona.
Ny Fetin'ny Sambo Dragon dia andro fahadimy amin'ny volana fahadimy. Ny fety sy ny fomba amam-panao izay mandroaka ny ratsy dia niteraka hetsika maro loko tamin'ny toerana maro, anisan'izany ny fahatsiarovana an'i Qu Yuan, famindrana mugwort, fisotroana divay tena izy, fihinanana zongzi, hazakazaky ny sambo dragona, sns.
Maninona isika no mankalaza ny Qu Yuan amin'ny Fetin'ny Sambo Dragon? noho ny fiheverany ambony ny fitiavan-tanindrazana, noho ny fihetseham-pony be fitiavana. Ny firenena sy ny firenena dia mila olom-pirenena manana fahatsapana andraikitra, mikarakara ny fiveloman'ny olona, ​​manome tombony ny fiaraha-monina ary mampiroborobo ny fampandrosoana. Tokony ho làlan'ny ezaka ataontsika izany. '' Ny fomba ahazoana fahalalana lalina sy fahalalam-pomba lehibe dia lavitra ka hitady azy ireo hatramin'ny paradisa ka hatrany amin'ny helo. ” mirary antsika rehetra hanao toy izany koa, tsy hitsitsy ezaka hikarohana sy hikatsaka ny marina.
Ny Dragon Boat Festival dia festival ihany koa hikarakarana tovovavy. Nandritra ny Dinasti Ming, nanomboka ny 1 Mey ka hatramin'ny faha-5, ny zazavavy nanambady dia nitondra an-janany niverina tany amin'ny fianakaviany, fa ny zazalahy sy zazavavy kosa nanasa ny tarehiny tamin'ny lasopy calamus, ary ny tarehy nopetahany rouge ary nanamboatra volom-bolo avy amin'ny faka faka .
Tao amin'ny Fetin'ny Sambo Dragon, nivory nanodidina ny latabatra ny fianakaviana mba hizara ilay zongzi matsiro, izay ahazoana aina sy hafanana amin'ny andro. Ny fofon'ny zongzi dia hampahatsiahy anao ny fahazazanao, mahatadidy ny tsy firaharahana sy faly tamin'io taona io; raha mahatadidy ny lasa dia tokony hiatrika ny ho avy amin'ny fahatokisan-tena sy herim-po koa isika. Satria isan'andro feno fanantenana feno.
Farany, SUNSOUL dia mirary ny Fetin'ny Sambo Dragon rehetra ho anao.
Previous: Miandry anao ny SUNSOUL ao amin'ny The LATIN TIRE EXPO
Next: Ny orana amin'ny volana Jona